ချစ်တာတော့ ချစ်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အားနာပါ - Update New
ချစ်တာတော့ ချစ်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အားနာပါ
July 11, 2019 Naing ဗဟုသုတ 0
နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အညီ လူအများလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတဲ့ လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးလည်း ရှိသလို၊ ဥပဒေအနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိပေမယ့် အလိုက်တသိနဲ့ လိုက်လံကျင့်သုံးရတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလဲ ရှိပါတယ်
တစ်လောက သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသား ဟာရီနဲ့ ကြင်ယာတော် ကိတ်တို့ဟာ လူမြင်ကွင်ကို ထွက်တဲ့အခါတိုင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လက်ဆွဲနေခြင်း၊ ဖက်ရမ်း နမ်းရှုပ်နေခြင်း၊ အစားအစာ စသည်တို့ ခွံ့ကျွေးနေခြင်းမျိုး တွေ့ရခဲတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးကို ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်
ကောက်ချက်ချသူတစ်ယောက်ဟာ တော်ဝင်မျိုးနွယ်များမို့ တော်ဝင်စည်းကမ်းတွေအရ လူမြင်ကွင်မှာ လက်ဆွဲနေခြင်း၊ ဖက်ရမ်း နမ်းရှုပ်နေခြင်း၊ အစားအစာ စသည်တို့ ခွံ့ကျွေးနေခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုး မရှိကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် မင်းသားနဲ့ ကြင်ယာတော်ဟာ လူကြီး လူကောင်းများပီပီ PDA ကို လေးစားလိုက်နာခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
PDA ဆိုတာ ဘာလဲ ?
PDA ဆိုတာက Public displays of affection ကို ဆိုလိုတာပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပန်းခြံ၊ ကျောင်း၊ ပွဲတော် စတဲ့နေရာတွေမှာ အများပြည်သူအမြင်နဲ့ မသင့်တော်တဲ့ ကိုယ်အမူအယာ၊ နှုတ်အမူအယာတွေ မပြုမူမိအောင် ရှောင်ရှားခြင်းပါဘဲ။ ဒီလို ရှောင်တဲ့သူရယ်လို့ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အတော်နည်းပါးပါတယ်။
တစ်ချို့က ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေမှန်း၊ ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားကြပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဒီလိုလူတွေ ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ PDA ကို ချိုးဖောက်တာက ချစ်သူစုံတွဲတွေလို့ စစ်တမ်းတစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်။
လူမြင်ကွင်းမှာ အနမ်းကြမ်းကြမ်းတွေ ပေးတာ၊ ဘက်စ်ကားပေါ်ကဲ့သို့သော နေရာတွေမှာ ပက်ချွဲနှပ်ချွဲနဲ့ မခွဲနိုင်မခွာရက်ဖက်နေတာ၊ စာသင်ခန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေဆိုတာကိုတောင် မမြင်တော့ဘဲ၊ မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်တဲ့ အရာတွေ လုပ်နေတာမျိုးတွေဟာ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ အပြုအမူတွေပါဘဲ။
ဒီလိုအပြုအမူတွေဟာ အချစ်စိတ်နဲ့ မွှန်ထူနေလို့ ပြုလုပ်သူတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမထားမိပေမယ့် မြင်ရသူတွေ အဖို့မှာတော့ အတော်လေးကို နှာခေါင်းရှုံ့စရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ တစ်ချို့က ဘာသာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာတောင် မရှောင်နိုင်အောင်အထိ မိုးမွှန်နေတာတွေဟာ အလွန်စိတ်ပျက် စရာပါဘဲ။
ဒါတွေ လုပ်တော့ ဘာဖြစ်သလဲ ?
ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းကဲ့သို့လို အစိုးရပိုင်နေရာမျိူး/ သာသနာ့ဝတ္တကမြေလို နေရာမျိုးမှာ သောက်စားမူးယစ်ခြင်း၊ ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ ဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရတဲ့ သို့မဟုတ် ကျောင်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူလိုရတဲ့ အပြစ်တွေဆိုတာကိုတော့ သိစေချင်ပါတယ်။
အခုဆောင်းပါးမှာ ရည်ရွယ်တာက PDA ကို စောင့်ထိန်းသင့်တဲ့အရာ၊ စောင့်ထိန်းရမယ့်အရာဖြစ်ကြောင်းကို မသိတဲ့သူတွေ သိသွားစေဖို့သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်/
ခဈြတာတော့ ခဈြပါ ပတျဝနျးကငျြကို အားနာပါ
နိုငျငံတိုငျးနိုငျငံတိုငျးမှာ နိုငျငံရဲ့ ယဉျကြေးမှုနဲ့အညီ လူအမြားလကျခံကငျြ့သုံးနကွေတဲ့ လူမှုရေးယဉျကြေးမှုတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဒီယဉျကြေးမှုတှကေို ဥပဒအေရ ထုတျပွနျထားတာမြိုးလညျး ရှိသလို၊ ဥပဒအေနနေဲ့ ထုတျပွနျထားခွငျး မရှိပမေယျ့ အလိုကျတသိနဲ့ လိုကျလံကငျြ့သုံးရတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှလေဲ ရှိပါတယျ
တဈလောက သတငျးတဈပုဒျမှာ ဗွိတိနျတျောဝငျမငျးသား ဟာရီနဲ့ ကွငျယာတျော ကိတျတို့ဟာ လူမွငျကှငျကို ထှကျတဲ့အခါတိုငျး တဈယောကျကိုတဈယောကျ လကျဆှဲနခွေငျး၊ ဖကျရမျး နမျးရှုပျနခွေငျး၊ အစားအစာ စသညျတို့ ခှံ့ကြှေးနခွေငျးမြိုး တှရေ့ခဲတယျဆိုတဲ့ သတငျးလေးကို ဖတျမိခဲ့ပါတယျ
ကောကျခကျြခသြူတဈယောကျဟာ တျောဝငျမြိုးနှယျမြားမို့ တျောဝငျစညျးကမျးတှအေရ လူမွငျကှငျမှာ လကျဆှဲနခွေငျး၊ ဖကျရမျး နမျးရှုပျနခွေငျး၊ အစားအစာ စသညျတို့ ခှံ့ကြှေးနခွေငျးမြိုး မပွုလုပျရဘူးလို့ သတျမှတျထားတာမြိုး မရှိကွောငျး၊ ဒါပမေယျ့ မငျးသားနဲ့ ကွငျယာတျောဟာ လူကွီး လူကောငျးမြားပီပီ PDA ကို လေးစားလိုကျနာခွငျး ဖွဈနျိုငျကွောငျး ကောကျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။
PDA ဆိုတာ ဘာလဲ ?
PDA ဆိုတာက Public displays of affection ကို ဆိုလိုတာပါ။ အဓိပ်ပါယျကတော့ အမြားပွညျသူနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ပနျးခွံ၊ ကြောငျး၊ ပှဲတျော စတဲ့နရောတှမှော အမြားပွညျသူအမွငျနဲ့ မသငျ့တျောတဲ့ ကိုယျအမူအယာ၊ နှုတျအမူအယာတှေ မပွုမူမိအောငျ ရှောငျရှားခွငျးပါဘဲ။ ဒီလို ရှောငျတဲ့သူရယျလို့ အခွားနိုငျငံတှမှောလညျး အတျောနညျးပါးပါတယျ။
တဈခြို့က ကိုယျ့ရဲ့ အပွုအမူဟာ ပတျဝနျးကငျြကို စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစမှေနျး၊ ဘယျတုနျးကမှ မစဉျးစားကွပါဘူး။ နိုငျငံခွားမှာလညျး ဒီလိုလူတှေ ရှိပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့တော့ PDA ကို ခြိုးဖောကျတာက ခဈြသူစုံတှဲတှလေို့ စဈတမျးတဈရပျက ဆိုပါတယျ။
လူမွငျကှငျးမှာ အနမျးကွမျးကွမျးတှေ ပေးတာ၊ ဘကျဈကားပျေါကဲ့သို့သော နရောတှမှော ပကျခြှဲနှပျခြှဲနဲ့ မခှဲနိုငျမခှာရကျဖကျနတော၊ စာသငျခနျးတှေ၊ ကြောငျးတှဆေိုတာကိုတောငျ မမွငျတော့ဘဲ၊ မလုပျသငျ့မလုပျအပျတဲ့ အရာတှေ လုပျနတောမြိုးတှဟော အလှနျဆိုးဝါးတဲ့ အပွုအမူတှပေါဘဲ။
ဒီလိုအပွုအမူတှဟော အခဈြစိတျနဲ့ မှနျထူနလေို့ ပွုလုပျသူတှကေ ပတျဝနျးကငျြကို သတိမထားမိပမေယျ့ မွငျရသူတှေ အဖို့မှာတော့ အတျောလေးကို နှာခေါငျးရှုံ့စရာ ဖွဈရပျတဈခုပါ။ တဈခြို့က ဘာသာရေးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ နရောတှမှောတောငျ မရှောငျနိုငျအောငျအထိ မိုးမှနျနတောတှဟော အလှနျစိတျပကျြ စရာပါဘဲ။
ဒါတှေ လုပျတော့ ဘာဖွဈသလဲ ?
ဘာမှ မဖွဈပါ။ ဒါပမေယျ့ ကြောငျးကဲ့သို့လို အစိုးရပိုငျနရောမြိူး/ သာသနာ့ဝတ်တကမွလေို နရောမြိုးမှာ သောကျစားမူးယဈခွငျး၊ ခဈြတငျးနှောခွငျးဟာ ဥပဒအေရ အရေးယူလို့ရတဲ့ သို့မဟုတျ ကြောငျးစညျးကမျးအရ အရေးယူလိုရတဲ့ အပွဈတှဆေိုတာကိုတော့ သိစခေငျြပါတယျ။
အခုဆောငျးပါးမှာ ရညျရှယျတာက PDA ကို စောငျ့ထိနျးသငျ့တဲ့အရာ၊ စောငျ့ထိနျးရမယျ့အရာဖွဈကွောငျးကို မသိတဲ့သူတှေ သိသှားစဖေို့သာ ရညျရှယျပါတယျ/
AYA Bank ၏ အများပြည်သူများသို့ တရားဝင် ကြေညာချက်